ခရိုအေးရှားနဲ့ဒိန်းမတ်တို့ ကစားမယ့်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းများ
ခရိုအေးရှားနဲ့ဒိန်းမတ်တို့ ကစားမယ့် ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းများ
1 Jul 2018 . 5:29 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲအဖြစ် ခရိုအေးရှားနဲ့ဒိန်းမတ်အသင်းတို့ မြန်မာစံတော်ချိန် တနင်္ဂနွေနံနက် ၁၂း၃၀ အချိန်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ခရိုအေးရှားအသင်းနည်းပြ ဒါလစ် Dalic ဟာ အိုက်စလန်နဲ့ပွဲတုန်းက အနားပေးခဲတဲ့ အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ရာကီတစ် Rakitic ၊ လိုဗရန် Lovren ၊ မန်ဇူကစ် Mandzukic တို့ အားလုံးကို ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် အသုံးသွားမှာပါ။ နံရိုးကျိုးဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူခဲ့ရတဲ့ ဒိန်းမတ်ကွင်းလယ်လူ ခါဗစ် Kvist လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနေပြီဖြစ်ပြီး ဒီပွဲမှာ ပါဝင်ကစားဖို့ နီးစပ်နေတယ်။ ကွင်းလယ်လူ သောမတ်စ်ဒီလာနေး Thomas Delaney နဲ့ နောက်ခံလူ ဆဗီယက်ချန်ကို Sviatchenko တို့ကတော့ ပါဝင်ဖို့ မသေချာပါဘူး။ ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရတဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမား ယူဆက်ဖ်ပေါလ်ဆင် Yussuf Poulsen ပြစ်ဒဏ်စေ့သွားပြီဖြစ်တာကြောင့် ပါဝင်ကစားနိုင်မှာပါ။ ခရိုအေးရှားအသင်းမှာတော့ တောင်ပံကစားသမား မာကိုယာဆာ Marko Pjaca ခြေသလုံးဒဏ်ရာကနေ ပြန်သက်သာလာပြီး လေ့ကျင့်ခန်းနေပါပြီ။
– အဓိက နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဒိန်းမတ်အသင်းတို့ နောက်ဆုံးဆုံတွေ့ခဲ့တာက ယူရို-၁၉၉၆ အုပ်စုအဆင့်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ခရိုအေးရှားအသင်းက ဂန္ထ၀င်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဒေဗော်ဆူကာ Davor Suker(၂ဂိုး) ၊ ဘိုဘန် Boban တို့ရဲ့ ဂိုးတွေ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။
– ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့် တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ခရိုးအေရှားအသင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ကို ပြန်လည် တက်လှမ်းခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ခရိုအေးရှားအသင်း တတိယရခဲ့ပြီး အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးရပ်တည်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်။
– ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အုပ်စုပွဲစဉ်(၃)ပွဲစလုံး အနိုင်ရခဲ့တာက ခရိုအေးရှားအသင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ပွဲဆက်အများဆုံးအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခရိုအေးရှားအသင်း သွင်းခဲ့တဲ့ (၇)ဂိုးမှာ (၆)ဂိုးက ဒုတိယပိုင်းရောက်မှ သွင်းခဲ့တာပါ။
– ဒိန်းမတ်အသင်းဟာ ၁၉၈၆၊ ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွေတုန်းက ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အခု စတုတ္ထအကြိမ် ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်(၃)ကြိမ်တုန်းက ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားတစ်ကြိမ်သာ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ထိ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။
ခရိုအေးရှားနဲ့ဒိနျးမတျတို့ ကစားမယျ့ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ မှတျတမျးမြား
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ပှဲအဖွဈ ခရိုအေးရှားနဲ့ဒိနျးမတျအသငျးတို့ မွနျမာစံတျောခြိနျ တနင်ျဂနှနေံနကျ ၁၂း၃၀ အခြိနျမှာ ယှဉျပွိုငျကစားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ မှတျတမျးတှကေို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ခရိုအေးရှားအသငျးနညျးပွ ဒါလဈ Dalic ဟာ အိုကျစလနျနဲ့ပှဲတုနျးက အနားပေးခဲတဲ့ အဓိကကစားသမားတှဖွေဈကွတဲ့ ရာကီတဈ Rakitic ၊ လိုဗရနျ Lovren ၊ မနျဇူကဈ Mandzukic တို့ အားလုံးကို ပှဲထှကျကစားသမားအဖွဈ အသုံးသှားမှာပါ။ နံရိုးကြိုးဒဏျရာကွောငျ့ အနားယူခဲ့ရတဲ့ ဒိနျးမတျကှငျးလယျလူ ခါဗဈ Kvist လကေ့ငျြ့ခနျးပွနျဆငျးနပွေီဖွဈပွီး ဒီပှဲမှာ ပါဝငျကစားဖို့ နီးစပျနတေယျ။ ကှငျးလယျလူ သောမတျဈဒီလာနေး Thomas Delaney နဲ့ နောကျခံလူ ဆဗီယကျခနျြကို Sviatchenko တို့ကတော့ ပါဝငျဖို့ မသခြောပါဘူး။ ပှဲပယျပွဈဒဏျကခြံခဲ့ရတဲ့ တိုကျစဈကစားသမား ယူဆကျဖျပေါလျဆငျ Yussuf Poulsen ပွဈဒဏျစသှေ့ားပွီဖွဈတာကွောငျ့ ပါဝငျကစားနိုငျမှာပါ။ ခရိုအေးရှားအသငျးမှာတော့ တောငျပံကစားသမား မာကိုယာဆာ Marko Pjaca ခွသေလုံးဒဏျရာကနေ ပွနျသကျသာလာပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးနပေါပွီ။
– အဓိက နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲမှာ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဒိနျးမတျအသငျးတို့ နောကျဆုံးဆုံတှခေဲ့တာက ယူရို-၁၉၉၆ အုပျစုအဆငျ့ပှဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတုနျးက ခရိုအေးရှားအသငျးက ဂန်ထဝငျကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဒဗေျောဆူကာ Davor Suker(၂ဂိုး) ၊ ဘိုဘနျ Boban တို့ရဲ့ ဂိုးတှေ နဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။
– ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ တကျရောကျခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ခရိုးအရှေားအသငျး ဒုတိယအကွိမျမွောကျအဖွဈ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ကို ပွနျလညျ တကျလှမျးခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ခရိုအေးရှားအသငျး တတိယရခဲ့ပွီး အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံးရပျတညျမှုဖွဈခဲ့တယျ။
– ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ အုပျစုပှဲစဉျ(၃)ပှဲစလုံး အနိုငျရခဲ့တာက ခရိုအေးရှားအသငျးရဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ ပှဲဆကျအမြားဆုံးအနိုငျရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ခရိုအေးရှားအသငျး သှငျးခဲ့တဲ့ (၇)ဂိုးမှာ (၆)ဂိုးက ဒုတိယပိုငျးရောကျမှ သှငျးခဲ့တာပါ။
– ဒိနျးမတျအသငျးဟာ ၁၉၈၆၊ ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၂ ခုနှဈတှတေုနျးက ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ကို တကျရောကျခဲ့ပွီး အခု စတုတ်ထအကွိမျ ရောကျရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အရငျ(၃)ကွိမျတုနျးက ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားတဈကွိမျသာ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ထိ တကျရောကျနိုငျခဲ့တယျ။